TANDREMO IRENY TOLOTR'ASA AMIN’NY PETA-DRINDRINA IRENY
MISY AMBADIKA MIAFINA : LASA ADALA ILAY TOVOVAVY
« Mitady mpiasa maika, tsy mila mari-pahaizana sy traikefa, karama tena tsara manodidina ny 350.000 Ar. Antsoy ny nomeraon’ny telefaonina …. raha liana amin’izany ianao». Santionan’ireny peta-drindrina fitadiavana mpiasa mipetaka eny amin’ny rndrina ireny io voalazanay io. Maro karazana tokoa mantsy amin’izao fotoana izao ireny peta-drindrindra ahitana tolotr’asa ireny, ny ankamaroan’izy ireny dia mitady tovovavy. Maro araka izany ireo tanora no roboka ka mamaly avy hatrany azy ireny, tsy mila fari-pahaizana sy traikefa tokoa kanefa toa tena tsara karama.
Tantaran’ny tovovavy iray anisan’ny namaly tamin’ireny tolotr’asa peta-drindrina ireny ity arosonay ho anareo mpamaky ity. Io tolotr’asa voalazanay etsy ambony io no novalian’io tovovavy io. Zava-nisy tena marina ity ho tantaranay ity ka samia mandray izay tandrify azy.
Tovovavy iray eo amin’ny 20 taona mahery kely eo ho eo ity ho resahana ity. Rehefa nahita ilay peta-drindrina ny tenany dia niantso ilay telefaonina voasoratra tamin’ilay tolotr’asa. Nanome fotoana sy ora azy ilay olona namaly ka teo Antanimena no nifanaovana fotoana. Tonga tamin’ilay fotoana nifanomezana izy. Tovovavy maromaro no efa niandry teo amin’ilay toerana ary fiara 4x4 roa, entina mpamily Malagasy no nitondrana azy ireo. Niakatra tao anaty fiara ireo tovovavy ireo ary roso ny dia. Raha ny filazany dia tany Ambohibao tany no nandehanan’izy ireo. Trano lehibe iray maro efitra voadidina tamboho avobe ary misy vavahady avobe ihany koa no nidiran’ireo mpandeha. Marihina fa nisy mpiambina ny vavahadin’ity trano ity. Dia nampandrosoana ireo tovovavy ary samy nampidirina tamin’ny efitrano iray avy fa hatao “entretien” hono. Taorian’ilay voalaza hoe entretien dia nasaina niditra tamina efitrano iray indray ity tovovavy ity. Gaga izy fa feno ankizy kely tao amin’ilay efitra. Niditra avy eo lehilahy iray nitondra antsy be ary niteny tamin’ny hoe “ity ny antsy ary misafidiana ianao ankizy dimy amin’ireo ary dia vonoy… Omena anao ny karamanao avy eo”. Taitra sady natahotra ilay tovovavy ka voalazany fa avy hatrany dia latsaka hatramin’ny fivalanan-dranony ary feno ny tongony. Nitady lalana hivoahana haingana izy, so ahoy ihany izy fa tsy nifanalavitra loatra tamin’ny vavahady ilay efitrano nampidirana azy ka avy hatrany dia nivoaka ilay toerana ny tenany ary nilaza tamin’ilay mpiambina fa poritra mafy. Asa na ny fahitan’ilay mpiambina azy efa feno pipi no namelan’ilay rangahy azy hivoaka ilay tanana.
Dia nitsoaka nanavotra aina rakalakely. Araka ny fitantarany dia toan’ny very saina izy ka tsy hitany hatramin’ny lalana nody tany an-tranony raha tsy andro iray taorian’ny nivoahan’ilay trano. Raha vao tonga tany amin’ny fianakaviany izy dia ny hoe “saika maty aho, saika maty aho… sy ny ho antsy be…” , izay hatrany no teny nivoaka ny vavany. Araka ny filazany hatrany dia olona marobe no miasa ao amin’ity toerana nitondrana azy ity fa izay asa tena ataon’ireo olona ireo no tsy fantany marina fa raha ny asa nampanaovina azy aloha dia hamono zaza dimy. Ny niafaran’ireo tovovavy niaraka taminy dia tsy fantatra.
Vokatr’izany zavatra nanjo azy izany, teo ny tahotra sy ny hatairana mafy sy ny fahadisoam-panantenana, satria dia asa no nandrandraina kanefa dia famonoana ankizy tsy manan-tsiny no nasaina nataony, dia voa tanteraka ny sain’ity tovovavy ity. Amin’izao fotoana izao dia tsaboina eny amin’ny toerana fitsaboana adala izy.
Mipetraka eto ny fanontaniana. Zanak’iza avokoa ireo zaza marobe voalazan’ilay tovovavy fa voatazona tao amin’ilay trano? Ireo angamba no anisan’ireny zaza marobe nisy mangalatra ka tsy hita ireny. Dia inona no antony nasaina nampamonoana ireo zaza ireo ary atao inona ny fatin’ireo zaza aorian’izany? Inona no tena nilana ireo tovovavy hanatanteraka izany vono olona izany ? Fanontaniana saro-baliana avokoa izany kanefa mampisaina ny tsirairay.
Ho antsika tanora, aza sodokan’ireny peta-drindrina ireny. Tsarovy fa tsy misy asa azo moramora fotsiny izany ary ny volan’olona tsy omeny fotsiny amin’izao fa tsy maintsy misy tambiny ao. Mandiniha tsara aloha vao manao zavatra fa sao dia tojo ny mangidy toy ny nahazo ity tovovavy ity. Ho anareo ray aman-dreny indray indrindra ireo manana zanaka mbola kely dia aza varimbariana fotsiny fa araho maso tsara ny ankizy na milalao izany na mandeha na avy mianatra. Maro ny zaza very amin’izao fotoana ary ny ankamaroan’izy ireny dia tsy hita popoka.Tadidio fa tsy kely lalana ny mpanao ratsy ka mila mailo hatrany.
Nanatontosa : Indyah N.